Daawo:-Rashka oo Buuhoodle yimid iyo Beesha Axmed Garaad oo dhabarka u jeedisay – KHAATUMO NEWS
Daawo:-Rashka oo Buuhoodle yimid iyo Beesha Axmed Garaad oo dhabarka u jeedisay
Maxamuud cabdilaahi caano nuug mr Rashka ayaa Buuhoodlee maanta soo gaadhay.
ina caano-nuug ayaa ka mid ahaa hadhaadiga kooxdii cali khaliif galaydh ee magacii maamulka khaatumo ula galay Beesha isaaq.
Maxamuud cabdilaahi caan-nuug oo Buuhoodle maanta yimid ayaa beelweynta axmed garaad u jeedisay dhabarka iyadoo ay soo dhaweeeyen xubmo uu kamid yahay sudheeyo oo isna kamid ah kooxdan magacii khaatumo hargaysa la gashay.
caano nuug ayaa lagu xasuusta 2017 mar buuhoodle isku dilen beelaha hagar iyo cali gari iyadoo xabadu socoto dad badana dhinten in u aad ugu jeesjeesay dagaalkaas islamarkaana xabadii dhacasay ee beeluhu isla dhacayen wuxuu ku tilmaamay rash isaga lagu soodhaweynaayo.
Previous Post: Daawo:-Ina Kaahin oo Beesha habar Jeclo Shir uu xalay Hargaysa kula yeeshy Ku shaaciyay Sir culus
Next Post: Daawo:-Boqor Buurmadow Oo dhabar Jabiyay Dhiigyacab Maxamed Kaahin oo xalay Hargaysa ku shiriyay Habar Jeclo
Waar maxaa la khuurinaysaa miyaydinaan maqal TARXIILKA ay Majeerteeniya ku samaysay askartii Dhulbahante ee fadhigoodu uu ahaa CARMO oo amar lagu siiyay in caawa ka baxaan tuulada iyaga oo bilaa cunto iyo gaadiid ah.
[url=https://cialisrt.com/]buy cialis soft tabs online[/url]